यो मूल को इतिहास सरकारको फारम, को राजतन्त्र, दास प्रणाली सुरु। र समय, यो विकसित र एक प्रमुख Feudalism भएको छ। यसको परम्परागत सुविधाहरू बुर्जुआ समाजमा संरक्षित गरिएको छ छ।
यद्यपि, यो राजतन्त्र अझै पनि विद्यमान छ। यो धेरै परिवर्तन भएको छ, तर यो निहित मुख्य सुविधाहरू, त्यहाँ छ।
सरकारको यस प्रकारको एक किसिम - सीमित राजतन्त्र, यो फारम सर्वोच्च राज्य शक्ति सम्राट बीच र अन्य एक वा बढी अंगहरु विभाजित छ जसमा हुन मानिन्छ। उदाहरण बेलायत वा शाही रूस मा Zemsky Sobor मा संसद समावेश गर्नुहोस्।
त्यसैले सामूहिक आफ्नो शक्ति सीमित छ कि अंगहरु भनिन्छ - फलस्वरूप, एक सीमित राजतन्त्र राज्य शक्ति, सम्राट वास्तवमा र "संसद" को कानुनी रूपमा स्वतन्त्र कि वास्तवमा व्यक्त गरिएको छ जो एक peculiar duality गर्न जान्छ। तथापि, राजा अक्सर संसद संग reckon गर्न बाध्य छ, उहाँले नियुक्त गर्ने अधिकार छ सरकार, यसलाई वाहक दायित्व तथापि, यो सरकारको काम छलफल वा संसद मा यो आलोचना गर्न विषय हुन सक्छ।
तथापि, यस्तो एउटा प्रतिनिधि संस्था सरकारको फारम, सीमित राजतन्त्र रूपमा, नियन्त्रण कार्य, बोल्ने शासक छलफल गर्न छ जो को अधिकार संग यति zakonosoveschatelnogo शरीर प्राप्त। एकै समयमा सम्राट देश को संसद मा एक मजबूत प्रभाव पार्न सक्छ: यो, यो गरेको व्यवस्था मा प्रतिबंध आयातित सक्नुहुन्छ संसद भंग गर्न प्रतिनिधि नियुक्त।
संवैधानिक वा संसदीय र dualist: सीमित राजतन्त्र दुई प्रकार को छ। सरकार - आफ्नो पहिलो संस्करणमा कानून monarchical शक्ति संसद द्वारा सीमित छ भन्ने तथ्यलाई र कार्यकारी द्वारा प्रतिष्ठित छ।
तथापि, व्यवस्थापन यो फारम राज्य कुनै पनि भूमिका सम्राट को अभाव होइन। यसलाई उदाहरणका लागि, अख्तियार एक ठूलो पर्याप्त सीमा छ, मार्शल व्यवस्था को घोषणा वा आपतकालीन एक राज्य, युद्ध को घोषणामा वा यसको समापन, आदि अधिकार तर, यो साँच्चै खतरामा राज्य हुँदा मात्र गर्न सक्छन् यसको सुविधाहरू राजा फाइदा लिन।
यो पनि सम्राट शक्ति राज्य संविधान द्वारा सीमित छ भन्ने कारण को लागि, एक सीमित राजतन्त्र र संवैधानिक भनिन्छ। किन राजा को प्रेरित देखि arising सरकारको यस्तो फारम मात्र संसदीय बहुमत द्वारा अनुमोदन पछि प्रभावकारी बन्न पर्छ भन्ने छ। यस मामला मा, राजा उदाहरणका लागि राष्ट्रलाई र मानिसहरूको प्रतीक, मानिन्छ इङ्गल्याण्ड को रानी।
आज, वस्तुतः सबै युरोपेली monarchies संसदीय वा संवैधानिक हो स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन, हल्याण्ड, स्वीडेन, डेनमार्क, बेल्जियम, आदि
Dualistic सीमित राजतन्त्र पूर्ण देखि एक संसदीय प्रणाली गर्न संक्रमण छ। शक्ति को विभाजन यस्तो नियन्त्रणमा संसद र सम्राट बीच औपचारिक कानुनी रूपमा स्थान लिन्छ। यसरी, सम्राट उसलाई द्वारा र सरकार यो संसद मा कानून enacts रूपमा नै समय उहाँलाई जिम्मेवार मा नियुक्त मार्फत आफ्नो देश governs।
का बीच अवस्थित फरक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरौं एक संसदीय राजतन्त्र dualistic - र आफ्नो तरिका। सम्राट - - सबै विधान शक्ति deprived छ यो राज्य को एक dualistic राजतन्त्र टाउको मा कि स्पष्ट छ। संसदीय वा संवैधानिक सम्राट मा जबकि नै दुवै विधान र कार्यकारी शक्ति को deprived छ।
जो absolutism गर्न विरोध Monarchs को अधिकार को प्रतिबन्ध आवश्यक भएको 18 औं र 19 औं शताब्दीपछि मा युरोप मा आफ्नो उपस्थिति द्वारा revolts, सम्बन्धित दोहरी राजतन्त्र।
सीमित आज dualistic monarchies उदाहरणहरू नेपाल, कुवेत छन्।
को Tsarevich - यो शाही सिंहासन गर्न हकदार छ
रस को 'बप्तिस्मा - एउटा महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद को मिति
भिल्ना प्रान्त - राष्ट्रिय इतिहासको पृष्ठ को एक
चरण ट्युटोरियल द्वारा चरण: कसरी कागज को बक्स बनाउन
नास्ता विकल्पहरू: रोचक विचार, उत्कृष्ट व्यञ्जनहरु र समीक्षा
बिरालो खाना "शाही Canin": संरचना र समीक्षा
परिभाषा, संरचना र कार्य: chromatin के हो
एक भूमि तल घरहरू परियोजनाहरू। छिंडीमा र ग्यारेज संग घरहरू परियोजनाहरू
मान्छे को ट्रिब्यून। मूल र समारोह
Insula Resort र स्पा5*। टर्की मा बिदा को लागत
साइटमा घाँस कसरी घास काटन गर्न? Trimmers "HUSQVARNA" - आफ्नो सिद्ध सहायक!
Crocuses: गिरावट मा रोपण। व्यावसायिक सल्लाह